Mercy Rosary Discover Discover Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukufunda indlela yokuthandaza Inceba Rosary, okanye ekwabizwa ngokuba yiChaplet of Divine Mercy, sicebisa ukuba ufunde iposti yethu entsha kude kube sekupheleni.
1 Yintoni iChaplet okanye iRosary of Mercy?
2 Ithandazwa njani iRosari yeNceba?
2.4 4 nyathelo
2.5 5 nyathelo
2.6 6 nyathelo
2.7 7 nyathelo
2.8 8 nyathelo
3 Imithandazo yeRosari yeNceba
4 Imithandazo ngohlobo lwenovena
5 Ubhiyozelwa nini umthendeleko wenceba?
5.1 Ngubani uSr Faustina Kowalska?
6 Ukuzinikela kwenceba kaThixo
7 Wasasazeka njani umyalezo weNceba kaThixo?
Yintoni iChaplet okanye iRosary of Mercy?
Yaziwa ngokuba yiChaplet of Divine Mercy okanye Inceba Rosary Kweso siko kunye nokuzinikela ekufuneka onke amaKatolika athandazele iNgcwele yeNkosi yethu. Ngokwesiqhelo le mithandazo ihlala ithandazwa kusetyenziswa irosari, nangona kunjalo, inokwenziwa ngaphandle komnye, kuba le mithandazo ilula ukuyenza. Sitsho ukuba ngumthandazo olula kakhulu kuba imithandazo eqhelekileyo yile:
Ithandazwa njani iRosari yeNceba?
Okulandelayo, siza kukucacisela inyathelo ngenyathelo kodwa ngokufutshane kwaye ngokufutshane, nganye yeenkqubo ekufuneka zenziwe ukuze uthandaze. irosari Yenceba ngokuchanekileyo.
Qala ngokuzinqumla njengesiqhelo usebenzisa uphawu loMnqamlezo. Umzekelo:
loNyana neloMoya oyiNgcwele. Amen. "
Inyathelo lesibini libaluleke kakhulu, kuba ngalo uya kuqala kwimithandazo yakho yoxolelo kunye nenceba kuThixo. Ngale ndlela, qaphela uBawo wethu.
Malingcwaliswe igama lakho… "
Njengenyathelo lesithathu, kuya kufuneka wenze iSichotho sikaMariya.
«UThixo akusindise uMariya,
Qhubeka ufunde umgaqo, khumbula ukuba kufuneka ube mfutshane. Umzekelo:
"Ndiyakholelwa kuwo onke amandla kaThixo uBawo,
UMenzi wezulu nomhlaba… "
Xa ufikelela kumaso amakhulu eRosari yakho, kuya kufuneka ucengceleze oku kulandelayo:
«Bawo ongunaPhakade: Namhlanje ngalo mhla ndikunikela ngomzimba, igazi, umphefumlo nobuthixo bonyana wakho uYesu Krestu, ukuba usisicamagushelo sezono zethu nezo zehlabathi liphela. Amen. "
Khumbula ukuba nganye yamaso amancinci eRosari eNgcwele, elishumi, kufuneka ubhengeze:
yiba nenceba kuthi nakumhlaba wonke ».
Ngokuqhubekayo, ekupheleni kwenqanaba lesithandathu (6), kuya kufuneka uthethe esi sivakalisi silandelayo amaxesha amathathu (3):
Yiba nenceba kuthi nakwihlabathi.
Ngamanye amaxesha kwaye ukuba unqwenela, ungongeza umthandazo ngokukodwa owenzelwe iNkosi yethu uThixo, apho umbonisa khona ukuba uyamthemba.
Xa ugqibile kula manyathelo akhankanywe apha ngasentla, ungagqiba ngomthandazo, kuba oku kuya kufuneka wenze uphawu loMnqamlezo.
Imithandazo yeRosari yeNceba
Ukuphindaphindwa kweChaplet of Divine Mercy kunothotho lwemithandazo yokwenza umthandazo ngokuchanekileyo. Ezi zivakalisi zilandelayo:
Umqondiso woMnqamlezo oyiNgcwele.
Umthandazo ozenzekelayo kwiNkosi yethu uThixo.
Umthandazo ozenzekelayo wokuphelisa umthandazo.
Imithandazo ngohlobo lwenovena
Ngaphandle komthandazo olula esiqhele ukuwazi kunye nalowo ubusele ukhankanyiwe ngaphambili, ikwakhona neyanovena eya kwiChaplet of Divine Mercy. Lo mthandazo uhlala usetyenziswa ngendlela yobuqu, nangona kunjalo, unomthandazo onamandla amakhulu (Lo unokukhethwa nguwe, kodwa khumbula ukuba ayinakuba nguwo nawuphi na umthandazo esiwaziyo, kodwa wona unamandla amakhulu).
Le mithandazo inokwenziwa nangaliphi na ixesha, ukuba nje iintsuku ezilithoba ezihambelana nazo zizalisekisiwe, njengoko igama layo lingu "Novena" likhankanya. Ukongeza, kufuneka kuthandazwe ngaphambi komthendeleko wenceba ngomhla we-Ista.
Ubhiyozelwa nini umthendeleko wenceba?
Imibhiyozo yeNceba kaThixo ibhiyozelwa ngeCawa yesibini yePasika okanye eyaziwa njengeVeki eNgcwele. Rhoqo ngonyaka, icawe ihlala ibhiyozela iNceba yeNkosi yethu uThixo; Lo mbhiyozo waphakanyiswa yiNgcwele wasePoland, uDade Faustina Kowalska, wamkelwa ngokulandelelana nguPopu oNgcwele uJohn Paul II.
Ngubani uSr Faustina Kowalska?
UDade Faustina Kowalska wayelinenekazi elaliyinxalenye yeConvent of the Sisters of the Mother of God of Mercy, kanye ngelaxesha apho wafumana igama lakhe kuDade Faustina. Kwelinye icala, ngonyaka we-1931, inyanga kaFebruwari kunye ne-22 yenyanga leyo, uNkosazana uDade Faustina waba nako kwaye wabona ubungqina beNkosi yethu uYesu Krestu, lo mbono wazama ukushumayela iNceba kaThixo ngemithandazo, ii-oratorios , phakathi kwabanye, uKowalska wasweleka ngo-1938, eneminyaka engama-33 kuphela ubudala.
Ukuzinikela kwenceba kaThixo
Eyona ndlela inokubakho yokuba sibe nenceba njengeNkosi yethu njengoko ibethelele kuthi kungomthandazo, kuba ngaphandle koncedo lwezinto ezibonakalayo, ayikho enye indlela ebhetele esinokubonelela ngayo ngokuthandaza.
Wasasazeka njani umyalezo weNceba kaThixo?
Umfanekiso apho sinokubona khona uKrestu, uNkosi uSomandla, uMhlawuleli kunye neNceba yentliziyo yakhe entle, imitha emibini yokukhanya iyabonakala. Imitha ekhanyayo imele inceba kaThixo ekhoyo entliziyweni kaThixo. Kwakukho ixesha apho lo mfanekiso wawungavunyelwanga, ngaphandle koku, uPopu John Paul II wakubeka phambili ukuba umfanekiso wenceba kaThixo ubalulekile ecaweni, kuba basikhumbuza ukuba kusekho uThixo olungileyo, onobubele noxolelayo.
Ukongeza, lo mfanekiso usibonisa njengesixhobo sokukhusela, apho uYesu Kristu aya kusisindisa khona asizalise ngenceba yakhe. UYesu utyhila ukuba uya kunika ubabalo kunye noxolelo olupheleleyo kuyo yonke loo miphefumlo ilungileyo. Nangona kunjalo, kukho enye intsingiselo kwimitha emibini yokukhanya ebonakalisa intliziyo yakhe, kukuba enye imele igazi eliphalazwe ngabantu abathembekileyo kuye. Imitha yesibini yokukhanya imele amanzi, egwebela yonke imiphefumlo emsulwa yentliziyo kwaye izele kukulunga.
Ukuba uyithandile ibhlog yethu namhlanje kwi "Rosary of Mercy", sicebisa ukuba ulifunde eli nqaku Umthandazo wenceba kaThixo.